मेडिकल कलेजको मनोमानी- विचार - कान्तिपुर समाचार
मंसिर २३, २०७८ सम्पादकीय
मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग मन परी शुल्क असुले भनेरै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले चिकित्सा शिक्षाका सबै विधा र कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । यसमा विद्यार्थीबाट लिइने एकतिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीमा लिइने प्रावधान मात्र राखिएन, पहिलो वर्षको उक्त शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासम्म गरियो ।
तैपनि मेडिकल कलेजहरूको मनपरी रोकिएको छैन । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बाट सम्बन्धन लिएका निजी मेडिकल कलेजहरूले भर्नाको मौका छोपेर विद्यार्थीसँग २ लाखदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाउन थालेका छन् । सरकारलगायत सम्बन्धित निकायहरू कानुन पालना गराउन उदासीन देखिएकैले चिकित्सा शिक्षामा यो विकृति मौलाएको हो, मेडिकल कलेजहरूको हाकाहाकी राज्यको कानुन उल्लंघन गर्न सकेका हुन् ।
नियमानुसार शिक्षण शुल्कबापत पहिलो किस्ताको रकम विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरेर सम्पर्कमा आएका अभिभावक–विद्यार्थीसित कलेजहरूले अन्य शीर्षकमा समेत रकम मागेका हुन् । विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले सबैभन्दा बढी १८ लाख रुपैयाँ थप शुल्क मागिरहेको छ । उसले इन्टर्नसिपसहित ५ वर्ष होस्टल र खाना खर्चसमेत जोडेर शैक्षिक सत्रको सुरुमै एकमुस्ट रकम मागेको अभिभावकको गुनासो छ । मेडिकल कलेजहरूले होस्टल बस्न बाध्यकारी नियम बनाएर खाना र बस्ने व्यवस्थाका नाममा चर्को शुल्क असुलेका छन्, जबकि होस्टल बस्नु/नबस्नु विद्यार्थीको स्वेच्छा हो ।
यस्तै, भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागेको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेजले एमबीबीएसको शिक्षण शुल्क ४० लाख २३ हजार २ सय ५० बाहेक पनि १ लाख रुपैयाँ शुल्क उठाएको छ, खाना र होस्टलका लागि छुट्टै शुल्क तोकेको छ । नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौंले पनि परीक्षा, रजिस्ट्रेसन र पोसाकका नाममा अतिरिक्त शुल्क लिएको छ । यसै गरी, पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज र विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजले पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल गरेका छन् ।
कानुनअनुसार शिक्षण शुल्कबाहेक यस्तो कुनै शुल्क बुझाउनु पर्दैन ! चिकित्सा शिक्षा ऐनले शिक्षण शुल्क भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अवधिभर लिने भर्ना, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम, परीक्षासमेत रहने भनी परिभाषित गरेको छ । आयोगले पनि विद्यार्थी–अभिभावकलाई अतिरिक्त रकम नबुझाउन भन्दै आएको छ । तर, जति नै गैरकानुनी भए पनि शुल्क उठाइछाड्ने जब्बर कलेजहरूसित अभिभावक र विद्यार्थी निरीह छन् । अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेजहरूले पठनपाठनमा रोकसमेत लगाउने गरेका छन्, यसैले पनि विद्यार्थी–अभिभावक निरुपाय छन्, उनीहरूले आयोगसमक्ष लिखित/मौखिक उजुरीसमेत गरेका छन् ।
यस्तो उजुरीपछि आयोगले मंगलबार बैठक बसेर सम्बन्धित कलेज र विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ, सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अतिरिक्त शुल्क मागेर पठनपाठन र परीक्षामा बाधा पुर्‍याए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । अटेर गरे मेडिकल कलेज र सञ्चालकहरूलाई ठगीअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई लेखेर पठाउनेसमेत आयोगले जनाएको छ । तर यत्तिकैमा ढुक्क हुने अवस्था किन छैन भने, विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूसम्म पहुँच भएका कलेज सञ्चालकहरूले यसरी शुल्क उठाएको यो पहिलो पटक होइन, ऐन जारी भएपछि पनि यो क्रम निरन्तर छ । स्वयं आयोगले नै शिक्षण शुल्कका बारेमा तेस्रो पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको हो ।
मेडिकल कलेजहरूले यसअघि नै ३ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ ठगी गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले औंल्याइसकेको छ । १२ वटा मेडिकल कलेजले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बिल भर्पाई नदिई ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको केन्द्रको प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किएको छ । यसमा सरकारले कारबाहीको कुनै पहल नगरेकैले कलेजहरूको मनोमानी बढेको हो । सहज बुद्धिले पनि ठम्याउन सकिने सामान्य ज्ञान हो— जुनसुकै व्यवसाय गर्न पनि राज्यको कानुन मान्नुपर्छ, यसमा मेडिकल कलेजहरू अपवाद हुन सक्दैनन् । यी कलेजहरूलाई शुल्क लिने विषयमा बाँध्ने कानुन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ नै हुन् । यी कानुनको बर्खिलाप गर्ने छुट कुनै पनि कलेजलाई छैन ।
तैपनि उनीहरू किन कानुनभन्दा माथि छन्, जति गैरकानुनी शुल्क उठाउँदा पनि उनीहरूलाई किन कारबाही हुँदैन ? यसबारे सरकारी निकायहरू उदासीन भैरहे भने, यो असाधारण प्रश्नको साधारण जवाफ भेटिन्छ— अर्बौंको अंकमा उठाइएको अतिरिक्त रकमको हिस्सा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी तथा शक्तिशाली निकायहरूसम्म पनि आइपुग्छ ।
विगतदेखि नै सत्तामा रहेका नेताहरू–मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूबीचको ‘हिमचिम’ लुकेको विषय होइन । अघिल्लो सरकारका पालामा एक मेडिकल कलेज सञ्चालकले त खुल्लमखुला नै ‘अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउनुपरे सरकार र शिक्षामन्त्री नै फेरिदिने’ अभिव्यक्तिसम्म दिएका थिए । यसबाट पनि राज्यकानुन नमान्ने उनीहरूको शक्तिको स्रोतबारे अनुमान गर्न सकिन्छ । मेडिकल कलेजहरूको यो मनोमानीले कानुनी राज्यमाथि खुला चुनौती दिइरहेको छ । त्यसैले सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति त्यागेर र आपसमा उचित समन्वय गरेर यी कलेजहरूको ठगीधन्दा बन्द हुनुपर्छ, विद्यार्थी–अभिभावकमाथिको आर्थिक शोषण रोकिनुपर्छ ।
प्रकाशित : मंसिर २३, २०७८ ०८:१८
पुलिस १–१ हिमालयन । मछिन्द्र २–० जावलाखेल
मंसिर २३, २०७८ हिमेश
काठमाडौँ — भावनामा चुर्लुम्म डुबेका अनुभवी प्रशिक्षक । रिस थाम्न नसकेका युवा प्रशिक्षक । अनि ५३ सेकेन्डमै गोल । सहिद स्मारक लिग ‘ए’ डिभिजन फुटबलको बुधबार तेस्रो चरणको अन्तिम दुई खेलको सार लगभग यही रह्यो ।
सबैभन्दा पहिले खेल सुरु भएको मिनेट नबित्दै भएको गोलबाट चर्चा सुरु गरौं । दशरथ रंगशालामा बुधबार दिनको पहिलो खेलमा हिमालयन शेर्पाले पुलिसविरुद्ध ५३ सेकेन्डभित्रै गोल निकालेको थियो । यसका नायक थिए कप्तान विश्वास श्रेष्ठ ।
हिमालयनले बल अगाडि बढाएको पहिलो अवसरमै विश्वासले गोल गरे । यो यसपालिको लिगमा अहिलेसम्मकै कम समयमा सम्भव गोल रह्यो । के यो नेपाली लिग इतिहासकै सबैभन्दा कम समयमा भएको गोल हो त ? होइन । विश्वासको यो गोलले २१ वर्षअगाडिको अर्को त्यस्तै गोललाई सम्झाउने अवसर भने जुराएको छ । ०५७ सालको लिगमा थ्रीस्टारले एनआरटीविरुद्ध खेल सुरु भएको १८ सेकेन्डमै गोल गरेको थियो ।
यो नै लिगबारे स्पष्ट अभिलेख राख्न थालेयताको सबैभन्दा कम समयमा भएको गोल हो । यसका नायक थिए, दीपक अमात्य । त्यो खेलमा थ्रीस्टार विजयी रह्यो ।
यस्तै भाग्य हिमालयनको रहेन । नतिजा पुलिसविरुद्ध बराबरीमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो । पुलिसका लागि सुमन लामाले ६० औं मिनेटमा गोल गरे । पुलिस ३ खेलमा अहिलेसम्म अपराजित छ, तर त्यसमध्ये दुई खेल बराबरीमा टुंगेको छ । टिम ५ अंकको स्थितिमा छ ।
त्यस अर्थमा पुलिसका लागि बराबरी पनि सन्तोषजनक नतिजा रह्यो । त्यसैले यो नतिजामा प्रशिक्षक अनन्त थापाले धेरै गुनासो गरेनन् । पुलिसले जुमनु राई र भोला सिलवालका रूपमा दुई भेट्रान खेलाडीलाई सब्स्टिच्युटमा उतारेको थियो । त्यसपछाडि प्रशिक्षक थापाको तर्क थियो, टिमलाई अनुभवी खेलाडी पनि आवश्यक छ, किनभने उनीहरूविना टिम निकै युवा छ । पुलिस अहिलेसम्म जुमनु र भोलाकै भरमा पर्नु के ठीक हुनेछ त ? त्यो समयले भन्ला ।
लिगजस्तो लामो समय चल्ने प्रतियोगितामा यो प्रयोगले काम नगर्न सक्छ । डर यसमै छ । अथवा यसको कारण कतै टिममा राम्रा खेलाडीको अभावमा प्रशिक्षक थापा आफ्ना पुरानै खेलाडीमा भर पर्नुपरेको त होइनन् ? जुमनु र भोला पुलिसका खेलाडी नहुँदो हो त यस्तो स्थिति उत्पन्न नहुन सक्थ्यो कि ? बराबरीमा हिमालयनका प्रशिक्षक युगलकिशोर राई पटक्कै खुसी देखिएनन् । उल्टै पूरा खेल अवधिमा यी प्रशिक्षक रिसको एकपछि अर्को शृंखलाबाट गुज्रिइरहेका थिए ।
यसक्रममा उनले आफ्नो ‘क्याप’ लाई एकभन्दा बढी अवसरमा रिसमा भुईंमा बजारे । पछि उनले भने, ‘यो रिस नियन्त्रणभन्दा बाहिरको त थिएन । तर टिमले रणनीतिअनुसार खेल्न सकेन ।’ पुलिसको खेल सुक्ष्म अध्ययन गरेर प्रशिक्षक राईले एक साता आफ्नो टिमको तयारी गरेका थिए, तर मैदानमा उनका खेलाडीले त्यसअनुसार खेल्नै सकेनन् । यस्तोमा हिमालयन तीन खेलबाट २ अंकमै सीमित रह्यो र रेलिगेसन क्षेत्रको नजिक रह्यो ।
अपराजित यात्रामा मछिन्द्र
जावलाखेललाई हराएपछि मछिन्द्रका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवाल खुसी नै रहे । डिफेन्डिङ च्याम्पियन मछिन्द्रले यसक्रममा आफ्नो अपराजित यात्रा कायम राखेको छ ।
टोलीले सीमान्त थापाको आत्मघाती गोलले १४ औं मिनेटमा अग्रता लिएपछि २१ औं मिनेटमा रञ्जित धिमालले दोस्रो गोल थपे । यो जितपछि मछिन्द्रको ३ खेलबाट ७ अंक भएको छ । यो खेलबाट देखियो, मछिन्द्र उपाधि रक्षा गर्ने मनसायमा छ । मछिन्द्रसँगै ७ अंकमा तीन टिम छन् । सातदोबाटो र मनाङ मर्स्याङ्दीको पनि ७ अंक छ ।
जावलाखेलको भने यो लगातार तेस्रो हार हो । टोली अंकविहीन रहेर रेलिगेसन क्षेत्रमा छ । जावलाखेलले लिगका सुरुआती तीनै खेलमा गोल गर्न सकेको छैन । उल्टै आत्मघाती गोल गरेको छ । खेलपछि जावलाखेलका प्रशिक्षक किशोर केसी खुबै भावनात्मक रूपमा प्रस्तुत भए । उनको चित्त दुखाइ प्रस्ट रूपमा धेरै थियो, विशेषतः आफ्नै खेलाडीप्रति । त्यसो त दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि प्रशिक्षकको भूमिकामा सक्रिय केसीले बिरलै आफ्ना खेलाडीको आलोचना गरेका छन् ।
तर मछिन्द्रविरुद्धको खेलपछि विशेषतः उनले दुई खेलाडीको आलोचनामा शब्द खर्चे । त्यसमा पहिलो खेलाडी थिए, गोलरक्षक टेकेन्द्रसिंह थापा । प्रशिक्षक केसीको निचोड थियो, टेकेन्द्रले केही जिम्मेवारीपूर्ण खेल खेलेको भए, यी दुवै गोल हुने थिएनन् ।
यी दुवै गोलमा तिनै गोलरक्षकको कमजोरी देखिएको थियो । प्रशिक्षक केसीलाई टिमका एकमात्र राष्ट्रिय टिमका सदस्य खेलाडी सुरज ठकुरीमा पनि गुनासो थियो । उनको तर्क थियो, सुरजको खेल टिमलाई चाहिएजस्तो रहेन ।
प्रशिक्षक केसीले थपे, ‘खेलाडीमात्र होइन, प्रशिक्षक पनि तरबारको धारमा छन् । प्रशिक्षक बर्खास्तगीको सम्भावनाबाट गुज्रिरहेको हुन्छ । त्यसैले खेलाडीको प्रदर्शनलाई लिएर उत्पन्न हुने असन्तोष आफ्नै मनमा धेरै गुम्साइरहे पनि ठीक हुन्न ।’ हुन पनि दुई गोलको जितले मछिन्द्रको त्यो सफलता सजिलो देखिन्छ । तर खेल यस्तो थिएन, जावलाखेलले लगभग बराबरीकै चुनौती पेस गरेको थियो । अनि केही सटिक आक्रमण बुनेको थियो । तर, पराजित रह्यो । यस्तोमा जावलाखेलले समस्या ठ्याक्कै कहाँनिर छ, खोज्न हतार भइसकेको छ ।
प्रकाशित : मंसिर २३, २०७८ ०८:०५